Ahitana vary 5 kg, menaka 1 litatra, voamaina,…. io fanampiana io ka ireo zokiolona mihoatra ny 70 taona no kendrena hahazo tombontsoa amin’izany. Tsy hisy ny filaharana mandritra ny fizarana fa aterina isan-tokantrano izany. Ny Ben’ny tanana mihitsy no hitarika, hotronin’ireo tompon’andraikitra eny anivon’ny Fokontany hisorohana ny fiparitahan’ilay tsimok’aretina coronavirus. Tsiahivina moa fa efa nahazo ny anjara fanampiany avy amin’ny Fitondram-panjakana ity kaominina ity ny Sabotsy teo. Vary 1 taonina sy 500 kg no azon’izy ireo tamin’izany niampy menaka 20 bidon mihaty 20 litatra avy. 6.000 Ar avy no nalohan’ny isan-tokantrano tamin’izany nahazoany vary 3 kg sy menaka iray litatra ka tao amin’ny EPP Ambanilalana no nanaovana ny fizarana. Olona 100 isaky ny Fokontany izay hita fa tena sahirana no notsongaina tamin’izany izay nomarihin’ity Ben’ny tanana ity fa niarahany niasa akaiky tamin’ny fokontany ka ho an’ireo efa nahazo ny anjarany tamin’ny sabotsy dia miandry indray aloha fa anjaran’ireo mbola tsy nahazo izany no hisitraka ny fanampiana amin’ny manaraka.